Tọọ vidiyo dị ka akwụkwọ ahụaja na Windows 7 | Akụkọ akụrụngwa
Esi edozi vidiyo dị ka akwụkwọ ahụaja na Windows 7
Tinye vidiyo dị ka akwụkwọ ahụaja na desktọọpụ Windows 7? Nke a nwere ike ịbụ otu ọrụ siri ike ịrụ, ọ bụ ezie na maka ndị gbasoro akụkọ ihe mere eme nke sistemụ arụmọrụ dị iche iche nke Microsoft chọrọ, nke a agaghị abụ nnukwu ihe ọhụụ.
Eziokwu bụ na n'ime Windows Vista Microsoft bịara na-akpali ọrụ nke ahụ masịrị ọtụtụ ndị, dịka aha ya DreamScene nyere ohere nke inwe ike itinye vidiyo ihe ọ bụla dị ka akwụkwọ ahụaja na desktọọpụ; ọ dị nwute na Microsoft kpebiri iwepụ atụmatụ a na nsụgharị ndị ọzọ, na-eche na ọ na-emebi nkwụsi ike na ọrụ nke sistemụ arụmọrụ. Ọ bara uru, enwere obere ngwa ọrụ anyị nwere ike itinye na Windows 7, nke na-enweghị oke iripịa nnukwu usoro nke usoro.
1 Ibudata ma gbaa DreamScene Windows 7
2 Mepụta ebe nkwụghachi na Windows 7
3 Ntuziaka ikikere na DreamScene
4 Kpee vidio ahụ DreamScene nyeere
Ibudata ma gbaa DreamScene Windows 7
DreamScene bụ obere ngwa ọrụ ị nwere ike budata na njikọ na-esonụ, nke dị mma maka ọtụtụ, ọ chọghị ka arụnyere kama ọ ga-egbu. Nke a bụ n'ihi na akụrụngwa enwere ike ibugharị, nke pụtara na anyị nwere ike ịgba ya ọbụlagodi site na mkpisi USB. Enwere ụfọdụ aghụghọ nke anyị ga-enwerịrị iji mezuo ebumnuche anyị, ihe anyị ga-ekwupụta n'okpuru iji zere ụdị mmebi ọ bụla na sistemụ arụmọrụ na ọgba aghara mgbe ị na-egwu vidiyo na akwụkwọ ahụaja desktọọpụ Windows 7.
Mepụta ebe nkwụghachi na Windows 7
Ngwaọrụ a na-akpọ DreamScene bụ obere, nke dabere na ntuziaka ụfọdụ ga-agbanwe Windows 7 Registry; n'ihi nke a, ọ dị mkpa ime Sistemụ weghachi ebe a sị na ihe abịarịa imebi ya; DreamScene nwere ike ịgba ya ọsọ n'ụlọ mbipute ụlọ, nke ndị ọkachamara na nke Ultimate dịka onye nrụpụtara ya siri dị, ọ bụ ezie na n'oge a enweghị ike ijide n'aka na ọ na-arụ ọrụ na Windows 8.1 n'ihi na anyị enwebeghị ike ịnwale ngwa ọrụ na ụdị ahụ.
Ntuziaka ikikere na DreamScene
Ihe nke abuo ichebara echiche bu na DreamScene anaghị agba ọsọ "pịa ugboro abụọ" dị mfe, ebe mgbanwe ndị a ga-eme na "Windows 7 Registry" na-agbanwe agbanwe; n'ihi nke a, ozigbo i mepeela ihe DreamScene ga - eme ma ị ga - eji bọtịnụ aka nri were họrọ ya jiri "ikikere nchịkwa" mee ya. Obere windo ga-apụta ozugbo, nke nwere naanị nhọrọ 2 ịhọrọ, ndị a bụ:
Nhọrọ mbụ ga-eme ka atụmatụ ahụ rụọ ọrụ, Enwere ike ihu obere “lickkpachapụ anya” (na-acha ọkụ) nke ihuenyo ahụ. Mgbe ị gbanyụrụ atụmatụ a na bọtịnụ ọzọ, ị ga-enwe ike ịmasị otu mmetụta ahụ, agbanyeghị na mgbanwe ọ bụla emere na "Windows 7 Registry" ga-eweghachite na nkịtị.
Kpee vidio ahụ DreamScene nyeere
Ọ bụrụ na ị tụọ pointer pointer na ụfọdụ ohere efu na desktọọpụ Windows 7 na pịa akanri, ị ga-achọpụta nke ahụ arụ ọrụ ọhụrụ abanyela na menu menu, nke na-ezo aka na DreamScene a.
N'oge a, DreamScene ga-apụta na-enweghị ike ịhọrọ ya, ịnakwere n'oge a ntakịrị aghụghọ anyị na-atụ aro n'okpuru:
Ikwesiri imeghe Windows Explorer.
Gaa ebe ị nwere vidiyo na usoro MPEG ma ọ bụ AVI.
Họrọ vidiyo kwuru na bọtịnụ aka nri.
Site na onodu menu, họrọ «Nịm dị ka Desktọpụ Bakcground".
Mgbe ị mechara ihe ikpeazụ, ị nwere ike ịmasị nke ahụ ozugbo vidiyo ahụ ga-apụta dị ka akwụkwọ ahụaja na desktọọpụ Windows 7; Ọ bụrụ na ị họrọla ihe nkiri zuru ezu, ọ ga-egwu site na mmalite ruo na njedebe, ọ bụ ezie na enweghị ụda ahụ.
Ọ bụrụ na ị pịa aka nri na desktọọpụ ọzọ (na ihe nkiri na-akpọ) ị nwere ike ịmasị nke ahụ DreamScene na-enye gị ohere ịkwụsịtụ vidiyo ahụ. Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ njirimara magburu onwe ya nke anyị nwere ike ịnwe ma ọ bụrụ na oge ụfọdụ anyị chọrọ inwe animation ma ọ bụ vidiyo nke ụdị ọ bụla dị ka akwụkwọ ahụaja na Windows 7.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Esi edozi vidiyo dị ka akwụkwọ ahụaja na Windows 7
Olee otú iji naghachi WMP mini ọkpụkpọ na Windows 7
Jikwaa Windows DUAL Boot na usoro ole na ole